» सरकार, कृषिका नारा घाममा सुकाइदेउ !
सरकार, कृषिका नारा घाममा सुकाइदेउ !
२०७७ भाद्र १७,बुधबार १७:१३
मकवानपुर । मलुकको ८० प्रतिसत जनसंख्या आवद्ध भएको र करिब दुई तिहाई जनसंख्याको जीविकोपार्जनसंग जोडिएको कृषि क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । जसका कारण ‘कृषि आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र पार्टीका घोषणापत्रमा मात्रै सिमित बनेको छ ।
हामीलाई सानैदेखि हलो जोत्दा सानो भइँन्छ भनेर सिकाइयो, अझै पनि समाजको दृष्टिकोणमा कृषि सम्पानयोग्य पेशाको रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । सत्ताले पनि त्यस्तै शिक्षा र संस्कृतिको विकास गरेको छ । जसका कारण बर्षेनी कृषि क्षेत्र ओरालो लाग्ने क्रममा छ भने कामको खोजीमा धेरै युवाहरु विदेशिएका छन्, रोजगारीकै लागि बसाई सर्नेको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
पौरख गर्ने जनशक्ति नभएपछि गाउँघरका जमिन बाँझिने क्रममा छन् । कृषि उत्पादन तथा पशुपालनमा लागेकाहरुमा पनि खासै रुचि देखिँदैन बरु उनीहरुको लागि कृषि बाध्यात्मक पेशा बनेको छ ।
बहुसंख्यक किसानसंग हलो, कोदाली र हसिँयालगायतका परम्परागत औजार मात्रै छ । ३ पटक खेतबारी जोत्नको लागि बर्षैभरी गोरु पाल्न बाध्य छन्, ग्रामिण भेगका किसानहरु ।
मुलुकमा तीन तहको सरकारको संरचना तयार भइसकेको छ । तीनै तहका सरकारले काम पनि गरिनै रहेका छन् तर सरकारको योजना र लगानी वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको देखिँदैन । किसानहरुका लागि सिचाँई, आवश्यक लगानीे, उन्नत बिउबिजन र उत्पादन भएका कृषि उपजको लागि बजार व्यवस्थापन नहुँदा किसानहरुको परिश्रम त्यसै खेर जाने अवस्था छ ।
पाइँदैन मल र बीउबीजन
किसानले समयमा मल र बीउबीजन पाउने गरेका छैनन् । मकवानपुरका बहुसंख्यक किसानले खेतबारीमा लगाएको बालीनालीमा समयमा मल हाल्न पाएका छैनन् । अहिले कोरोनाको जोखिम बढीहरेको अवस्थामा पनि किसानहरु मल पाउने आशामा कृषि सहकारीमा लामबद्ध भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तर उनीहरुले मल भने पाउने गरेका छैनन् । धान गहुँ मकै बेमौसमी तरकारीलगायतमा मल हाल्न नपाएको किसानहरुको गुनासो छ ।
त्यस्तै समयमा बीउबीजन नपाउनु पनि अर्को प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ । किटनाशक औषधि पनि भनेको समयमा उपलब्ध हुने अवस्था छैन ।
सिमित व्यक्तिको मात्रै पहुँच
कृषिसंग सम्बन्धित निकायमा सिमित व्यक्तिको मात्रै पहुँच रहेको कारण सरकारले गरेको लगानी आवश्यक क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन । कृषि कर्जा, स्थानीय तहले दिने अनुदान, घाँस तथा फलफूलका विरुवा, औषधिलगायतका अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रममा पनि सिमित व्यक्तिको मात्रै पहुँच पुग्ने गरेको छ । सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्नको लागि काजगपत्र बनाउनुपर्ने र विभिन्न निकायमा कृषि व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा निकै जटिलताहरु छन् । कृषकले स्थानीय र संघीय संरचना दुबैमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
राज्यको केही राम्रा योजनाको कारण अहिले मुलुकका धेरै युवाहरु कुखुरा तथा अण्डा उत्पादनमा लागेका छन् । केहीले व्यवसायिक तरकारी खेती पनि सुरु गरेका छन् । गाई तथा बाख्रा पालनमा धेरैको रुची बढेको देखिन्छ ।
तर विभिन्न जटिलता भने कायमै छ, जसका कारण किसानहरु उत्साहित भएर कृषि कर्ममा लाग्ने अवस्था भने छैन ।
सडकमा दूध, खाल्डोमा तरकारी
मुलुकमा विभिन्न स्थानमा उत्पादन भएका दूधले उचित बजार नपाउँदा किसानहरुले सडकमा दूध पोखेर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।
तरकारी खाल्डो खनेर पुरिरहेका छन् । कतिपयको खेतबारीमै तरकारी कुहिने गरेको छ । भण्डारणको उचित व्यवस्था व्यवस्था छैन । तर बिडम्बना नेपालमा प्रत्येक बर्ष करिब ७ अर्बको तरकारी र ३० अर्बको चामल छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
किसानले दूधको उचित मूल्य र बजार नपाएको कारण सडकमा पोखेर आक्रोश व्यक्त गरेको अनि कर्णालीका जनतालाई पौष्टिक आहार नपुगेर कुपोषणको शिकार बन्नु परिरहेको खबर हामीले देख्न र सुन्न पाएका छौँ । तर यसको व्यवस्थापनमा जिम्मेवार भएर काम गरिरहेको प्रत्याभूति राज्यले गराउन सकेको छैन ।
लागतकै मुल्यमा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी वा खाद्यान्न विक्रि गर्दा पनि उपभोक्तासम्म पुग्दा १० औँ गुणा महंगो पर्न जान्छ । बिचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता दुबै मर्कामा परेका छन् ।
निर्वाहमूखि कृषि प्रणाली
कृषिमा अहिले बालबालिका र ६० बर्ष उमेर कटेकाहरुको मात्रै निर्वाहमूखि सक्रियता देखिन्छ । जसका कारण कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर र व्यवसायीक बन्न सकेको छैन । ग्रामिण भेगका हरेक घरका किसान बैदेशिक रोगजारीमा छन् भने कृषि महिला तथा बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको भरमा छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा बोलाएर काममा लगाउन सक्ने राज्यको नीति सफल हुन सकेको छैन ।
मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुन पहिला परिवार, समाज, स्थानिय तह, जिल्ला, प्रदेश आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ । ग्रामिण र स्थानिय स्तरमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको सिजन अनुसारको बालीको उचित मुल्य तोक्ने र जिल्लामा आबश्यक कृषि उपज उत्पादन गर्ने गरी योजना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यहाँको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयातित उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अबलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सम्बन्धित जिल्लाका व्यवसायी, कृषि उपज खपत हुने होटल, विभिन्न कार्यालयहरु, उपभोक्ता समिति र कृषि सहकारीसंग कृषिको आवश्यक बजारीकरणको सम्दर्भमा आवश्यक छलफल गरी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । स्थानिय तहमा गतिलो कृषि संकलन केन्द्र र जिल्लामा संकलन, ग्रेडिङ तथा प्याकेजिङ केन्द्र स्थापना गर्दा उपयुक्त
स्थानिय उत्पादन संकलन गरी ग्रेडिङ र प्याकेजिङ पश्चात मात्र बजारमा बिक्रि गर्न सक्यौं भने उपभोक्ताले प्राथमिकताका साथ स्थानिय उत्पादन उपभोग गर्न सक्छन् । उत्पादक, अनुसन्धान र कृषि उद्योगलाई जोड्न सकेकै कारण विश्वमा धेरै मुलुकहरु कृषिमा सफलता प्राप्त गर्न सफल भएका हुन् ।
सरकारसंग कृषिका लागि सहि नीति र सोही अनुसारको लगानी आवश्यक पर्दछ । सफलता हासिल गर्ने योजना र सहि कार्यान्वयनको पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
नेपालमा कृषिका लागि नितिहरु अत्यन्तै राम्रा बन्ने गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको कारण सफलता हासिल गर्न कठिनाई भएको हो ।
कुलमानको जयजयकार, वालुवाटारलाई जलन !
सामाजिक सुरक्षा योजनामा बैदैशिक श्रमिकको महत्व
हुस्सु बन्न पुगेको भावुक पल
सूचनाको हक अभियानका हर्ष र विस्मातका तेह्र वर्ष
रेणुकाको गुप्त सम्बन्ध
एसाइलमबाट ग्रिनकार्ड स्वीकृत भएको ३ बर्ष ९ महिना भयो, नागरिकता आवेदन दिनसक्छु ?
मृतकको परिवारलाई एशियन लाईफ हेटौंडाद्वारा चेक भुक्तानी
हेटौंडाका थप ११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं उपत्यकामा थप ८०९ जनामा कोरोना पुष्टि
आइतबार बागमतीमा थपिए ९०२ जना कोरोना संक्रमित
बागमतीका पाँचसहित थप १० जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, कति पुग्यो कुल संख्या ?
नेपालमा कोरोना संक्रमण निको हुनेको संख्या साढे ५३ हजार नाघ्यो, थप ८ सय ८५ जना भए संक्रमण मुक्त
नेपालमा थप १५७३ जनामा कोरोना पुष्टि
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी निर्देशकमा डा.भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय
मकवानपुरका ७ सहित १७ निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो